Lammiilee kuma 2 oliif tajaajilli agartuu ijaa buqqisanii dhaabuu raawwatame – Fana Broadcasting Corporate
Lammiilee kuma 2 oliif tajaajilli agartuu ijaa buqqisanii dhaabuu raawwatame
Finfinnee, Fulbaana 25,2011(FBC)-Baankin Ija Ityoophiyaa lammiilee kuma 2 oliif tajaajila agartuu ijaa buqqisanii dhaabuu raawwate.
Buqqisanii dhaabun kun kan raawwate waaggoota 15 darban keessatti yoo ta’u, walumaagalatti lammiilee kuma 2 fi 800 ta’uu Ministeera Eegumsa Fayyaatti Daarektarri Daarektoreetii Meedikaal Sarvisii fi walitti qabaa boordii Baankii Ija Ityoophiyaa Dooktar Daani’eel Gabramikaa’el ibsaniiru.
Kabaja hundeeffama waggaa 15fffaa Baankii Ija Ityoophiyaa irratti argamuun haasawa taasisaniin,hojii ququllina qabu hojjeechuuf sochiin hanga yoonaatti raawwatame bu’a qabeessa ta’uu himaniiru.
sadarkaa idil addunyaattis beekkamtii argachuun waraqaan ragaa kennamuufi Dooktar Daani’eel eeraniiru.
Barreessan Boordii Baankii Ijaa kan ta’an Dooktar Maanan Ayyaalew gama isaanitiin rakkoo lammiilee hubachuun agartuu deebisuuf tattaaffii taasifamuun yeroo lubbuun jiranitti waadaa galuun lubbuun isaanii yeroo darbe maatii beeksisuun agartuu ijaa akka sassaabamuuf gahee isaanii bahachaa kanneen turaniif galata galchuu odeeffannoon Ministeera Eegumsa Fayyaati argame ni mul’isa.